barnay – The Only Way To Go!
ငယ် ငယ်က ကြားဖူး မှတ်သားဖူး ယုံခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်း … ပထမအရွယ် ပညာရှာ ဒုတိယအရွယ် စီးပွားရှာ တတိယအရွယ် တရားရှာ တဲ့ ။ တရားတွေ နာပြီး တဲ့ အခိုက် … အသိထဲ ပေါ်လာတဲ့ အတွေးကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဉာဏ်သွက်လက်တဲ့ အချိန်မှာ တရားကို ပြီးပြတ်အောင် ရှာထားတာက အကောင်းဆုံးလို့ သိရှိလက်ခံမိလိုက်တယ် … ။ ယခုအချိန်မှာ အရွယ်လွန်သည်ဖြစ်စေ မလွန်သည်ဖြစ် .. သေမင်းရန်က အေးတယ် မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ … ။ အမှည့်တဝင်းဝင်း အကင်းတဖြုတ်ဖြုတ် တဲ့ .. အရွယ်မရွေးပါ ။ စေတနာ များစွာဖြင့် ဘာနေ
1 Comment ပထမအရွယ်
အရိုင်းအစိုင်းတို့ သဘောသည် သက်ရှိအား ဒုက္ခကိုသာ ပေးတတ်သည်။ သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးသူမှာကား သက်ရှိအား သုခကိုသာ ပေးလေ့ရှိသည် ။ ပစ္စုပ္ပန်၌ တည်ရှိနေသော ကျွန်ုပ်တို့သက်ရှိလူတွေမှာ မိမိတို့စရိုက် ဖြစ်တည်မှု အရိုင်းနဲ့ အယဉ်ကို ရွှေးဖို့ရာအတွက် .. အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါသည်။ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုသည်မှာလည်း မိမိလိုချင်သော အရာကို ရွေးလုပ်ဖိုရန်သာ လိုပေသည် ။ ထို့ကြောင့် မိမိစိတ်ဆန္ဒသာ အဓိကဖြစ်သည် ။ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မိမိရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်လေသည် ။ ဤလောကကြီးအတွင်းရှိ လူအပါအဝင် သတ္တဝါအားလုံးတို့တွင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သတ္တဝါရှိသလို .. စိတ်ထားဖြောင့်မတ်ကောင်းမွန်တဲ့ သတ္တဝါလည်း ရှိပေသည် ။ ထိုသတ္တဝါချင်းအတူတူ မွေးဖွားလာတဲ့ ပုံစံတူ ၊ နေထိုင်ပုံခြင်း တူတူ ကြီးပြင်းလာကြပြီးမှ အယဉ်နဲ့အရိုင်း … More အရိုင်းနဲ့ အယဉ်
Leaveacomment အရိုင်းနဲ့ အယဉ်
Hey …… “Choosing is difficult or not?” “What do you want in your life _ things and properties ?” It is difficult to choose for me. My desire were changed within years and months. All of pasts of me were being over of my heart, not core of heart. So, they were changed within movements. … More The Choice
Read below and prepare before initialize. Open your thinking part of the mind. Don’t memorize anything which come across on your conscious mind at the current state. You will be notice your physical behaving. At this moment, You will see the happening state, but don’t memorize them. Passed one thing to another by watching only. … More That’s you don’t know ( Unseen)
Leaveacomment That’s you don’t know ( Unseen)